Puntland oo shuruud ku xirtay ka qeyb-galka Shirka Dhuusamareeb saddex – Kalfadhi
Dowlad Goboleedka Puntland oo xalay soo saartay war-saxaafadeed ayaa shuruud ku xirtay ka qeyb-galka shirka Dhuusamareeb 3, kaas oo looga hadlayo arrimaha masiiriga ee dalka, oo ay kamid yihiin doorashooyinka iyo amniga.
Maamulka Puntland ayaa dhaliil xooggan usoo jeedisay dowladda dhexe, waxaana sifo aan sharci aheyn ay ku tilmaamtay xil ka qaadistii Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre. Waxaa kale oo ay ku eedeeyeen in Madaxweynaha uu daahiyay magacaabista Ra’iisul wasaare cusub si aysan u hir-gelin is-afgaradkii Dhuusamareen labo iyo qabsoomida shirka 3-aad.
War saxaafadeedka ka soo baxay Madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in hadalkii Madaxweyne Farmaajo ka jeediyay kulankii Golaha Shacabka uu ahaa mid marin habaabin ku ah dadaalada dowlad goboleedyada ku doonayaan in si isla ogol looga shaqeeyo qabsoomida doorashada dalka ee 2020/21.
Puntland ayaa ugu baaqday madaxweynaha in uu magacaabo Ra’iisul wasaare, qeyb ka noqday fulinta heshiiska qabsoomida doorashooyinka. Sidoo kale Puntland ayaa sheegtay in qabsoomida shirka Dhuusamareeb 3 ay ka horeyso hubinta in lagu gaarayo heshiis saldhig u leh, sidaas darteed shirku uu noqdo mid ka qeyb galkiisa ay u dhan yihiin Madaxda dowladda Federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo Diblomaasiyiinta Beesha Caalamka.